Bit By Bit - မေးမေးခွန်းတွေကို - 3.1 နိဒါန်း
လင်းပိုင်ကိုလေ့လာတဲ့သူသုတေသီတွေကသူတို့ကိုမေးခွန်းများကိုမမေးနိုငျသညျ။ ဒါကြောင့်, လင်းပိုင်သုတေသီများအပြုအမူကိုလေ့လာရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေကြသည်။ လူသားမြားသညျကိုလေ့လာတဲ့သူသုတေသီများ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့သင်တန်းသားများကိုစကားပြောနိုင်သည်ဟူသောအချက်ကို၏အားသာချက်ယူသင့်ပါတယ်။ လူမေးခွန်းတွေမေးမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာလူမှုရေးသုတေသန၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လျက်, ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်စစ်တမ်းသုတေသနတွင်အချို့သောအပြောင်းအလဲများနိုင်ပါတယ်နှင့်လိုအပ်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောစစ်တမ်းသုတေသီများလက်ရှိခံစားမိကြောင်းအဆိုးမြင်နေသော်လည်းငါဒီဂျစ်တယ်ခေတ်စစ်တမ်းသုတေသန၏ရွှေအသက်အရွယ်ဖြစ်သွားကြောင်းမျှော်လင့်ကြသည်။
စစ်တမ်းသုတေသနသမိုင်းမှာအကြမ်းအားဖြင့်နှစ်ဦးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအားဖြင့်ကွဲကွာသုံးထပ်ခေတ်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည် (Groves 2011; Converse 1987) ။ အခုကျနော်တို့ဒုတိယနှင့်တတိယခေတ်အကြားအကူးအပြောင်းကာလ၌ရှိကြ၏, သို့သော်ပထမနှင့်ဒုတိယခေတ်-အဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းအကြားစစ်တမ်းသုတေသန၏အနာဂတ်အတွက်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်သူတို့ကို-ပေး။
စစ်တမ်းသုတေသန၏ပထမဦးဆုံးခေတ်ကာလအတွင်းအကြမ်းအားဖြင့် 1930 - 1960, သိပ္ပံနည်းကျနမူနာနှင့်မေးခွန်းလွှာဒီဇိုင်းမှာတိုးတက်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းစစ်တမ်းသုတေသနတစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်ဥာဏ်ပညာ၌ဖြစ်ပေါ်။ စစ်တမ်းသုတေသန၏ပထမဦးဆုံးခေတ်ဧရိယာဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာများနှင့်မျက်နှာ-to-မျက်နှာအင်တာဗျူးများအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့သည်။
ထို့နောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝအတွက်ဖုန်းလိုင်းဖုန်းများတစ်နည်းပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကို-The ကျယ်ပြန့်ပျံ့နှံ့နိုင်ငံပေါင်း-နောက်ဆုံးမှာစစ်တမ်းသုတေသန၏ဒုတိယခေတ်မှဦးဆောင်။ ဤဒုတိယခေတ်, အကြမ်းအားဖြင့် 1960 ကနေ - 2000, ကျပန်းဂဏန်းခေါ်ဆိုမှု (RDD) ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာများနှင့်တယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးခြင်းဖြင့်အစပျိုးခဲ့သည်။ ဒုတိယခေတ်မှပထမဦးဆုံးခေတ်ကနေအပြောင်းအလဲကိုကုန်ကျစရိတ်အတွက်ထိရောက်မှုနှင့်လျှောက်လျော့နည်းအတွက်အဓိကတိုးခဲ့သည်။ အများစုကသုတေသီများစစ်တမ်းသုတေသန၏ရွှေအသက်အရွယ်အတိုင်းဤဒုတိယခေတ်ကိုငဲ့။
အခုတော့အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကို-ဒစ်ဂျစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာစစ်တမ်းသုတေသန၏တတိယခေတ်မှကျွန်တော်တို့ကိုဆောင် ခဲ့. အသက်အရွယ်-ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအကူးအပြောင်းနှစ်ဦးစလုံးတွန်းအားပေးမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်အချက်တွေဆွဲထုတ်လျက်ရှိသည်။ ဒုတိယခေတ်ကနေချဉ်းကပ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်ဖြိုကြောင့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်, သုတေသီများပြောင်းလဲပစ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေလျက်ရှိသည် (Meyer, Mok, and Sullivan 2015) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ပို. ပို. နေအိမ်များနမူနာကြသူကြိုးဖုန်းတယ်လီဖုန်းနှင့် Non-တုန့်ပြန်မှုနှုန်း-ဖြေဆိုသူရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဒါပေမဲ့စစ်တမ်းများ-ကြပါပြီတိုးပွားလာခဲ့တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါဘူး (Council 2013) ။ နမူနာနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းမှဒုတိယခေတ်ချဉ်းကပ်၏ဤပြိုကွဲနှင့်အတူတပြိုင်နက်, ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရပ်ကွက်၏တိုးမြှင့်ရရှိမှုစစ်တမ်းများအစားထိုးခြိမ်းခြောက်ဖို့ပေါ်လာသော (အခန်း2ကိုကြည့်ပါ) လည်းရှိ၏။ ငါသည်ဤအခနျးမှာပြသပါလိမ့်မယ်အဖြစ်တတိယခေတ်ချဉ်းကပ်မှု, မယုံနိုင်စရာအခွင့်အလမ်းများကိုဆက်ကပ်: ။ , ဤတွန်းအားပေးအချက်များအပြင်, အချက်များဆွဲထုတ်လည်းရှိပါတယ် အမှုအရာလုံးဝသေးအခြေချကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်ကျွန်မစစ်တမ်းသုတေသန၏တတိယခေတ်ကို non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာနှင့်ကွန်ပျူတာအုပ်ချုပ်ခွင့်ရအင်တာဗျူးများအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုခံရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။ အစောပိုင်းခေတ်နမူနာကောတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းသူတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ကြပေမယ့်နောက်ထပ်, ငါသည်စစ်တမ်းသုတေသန၏တတိယခေတ်လည်းကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရပ်ကွက်များ (စားပွဲတင် 3.1) နဲ့စစ်တမ်းများ၏ချိတ်ဆက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုခံရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။
စားပွဲတင် 3.1: စစ်တမ်းသုတေသနသုံးခေတ်။ Non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာ, ကွန်ပျူတာအုပ်ချုပ်ခွင့်ရအင်တာဗျူးများနှင့်အခြားဒေတာနှင့်ဆက်စပ်စစ်တမ်းများ: ဒီအခန်းစစ်တမ်းသုတေသန၏တတိယခေတ်ကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ပထမခေတ် 1960 - 1930 ဧရိယာဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာ မျက်နှာချင်းဆိုင် မတ်တပ်ရပ်-တယောက်တည်းစစ်တမ်းများ
ဒုတိယအခေတ် 2000 - 1960 ကျပန်းဂဏန်းခေါ်ဆိုမှု (RDD) ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာ တယ်လီဖုန်း မတ်တပ်ရပ်-တယောက်တည်းစစ်တမ်းများ
တတိယခေတ် 2000 - ပစ္စုပ္ပန် non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာ Computer ကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရ အခြားဒေတာနှင့်ဆက်စပ်စစ်တမ်းများ
စစ်တမ်းသုတေသန၏ဒုတိယနှင့်တတိယခေတ်အကြားအကူးအပြောင်းလုံးဝချောမွေ့ခဲ့သေးပါဘူးနှင့်သုတေသီများဆက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်ဘယ်လိုပြင်းစွာသောအငြင်းခုံမှုများရှိခဲ့ပါပြီ။ ပထမဦးဆုံးနှင့်ဒုတိယခေတ်အကြားအကူးအပြောင်းအပေါ်ပြန်လိုက်ရှာငါငါတို့အဘို့အတစ် key ကိုထိုးထွင်းသိမြင်ယခုရှိတယ်လို့ကျနော်ထင်ပါတယ်: အစအဦးအဆုံးသည်မဖြစ်သေး။ ဒါကအစပိုင်းတွင်အများအပြားဒုတိယခေတ်နည်းလမ်းများကြော်ငြာ-hoc ခဲ့ကြပြီးအလွန်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်အားဖြင့်, သုတေသီများဒီပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်နှင့်ဒုတိယခေတ်ချဉ်းကပ်နောက်ဆုံးမှာဦးပထမဦးဆုံးခေတ်ချဉ်းကပ်မှုထက် သာ. ကောင်း၏။ Mitofsky နှင့် Waksberg ကောင်းသောလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်သီအိုရီဂုဏ်သတ္တိများခဲ့တဲ့ကျပန်းဂဏန်းခေါ်ဆိုမှုနမူနာနည်းလမ်းတီထွင်မီကဥပမာအားဖြင့်, သုတေသီများနှစ်ပေါင်းများစွာတယ်လီဖုန်းကျပန်းဂဏန်းခေါ်ဆိုမှုလုပ်နေခဲ့ (Waksberg 1978; Brick and Tucker 2007) ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့အဆုံးစွန်ရလဒ်နှင့်အတူတတိယခေတ်ချဉ်းကပ်၏လက်ရှိပြည်နယ်မရောထွေးသင့်သည်။ စစ်တမ်းသုတေသနသမိုင်းမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလယ်ပြင်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာ, နည်းပညာနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအပြောင်းအလဲများကမောင်းနှင်ကြောင်းစေသည်။ ကဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုရပ်တန့်ဖို့မလမ်းရှိပါတယ်။ အစောပိုင်းခေတ်ထံမှဉာဏျပညာဆွဲရန်ဆက်လက်နေစဉ်ယင်းအစား, ကျနော်တို့ကလက်ခံသင့်ပါသည်။ တကယ်တော့ငါဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ကလူမေးခွန်းများမေးဘို့အသေးဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားစရာအသက်အရွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
အခန်း၏ကျန်ရှိသောကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရပ်ကွက်စစ်တမ်းများကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်ဒေတာများတိုးမြှင်-မစည်းစိမ်လျော့နည်း-စစ်တမ်းများ (ပုဒ်မ 3.2) ၏တန်ဖိုးကိုကြောင်းမည်မဟုတ်ကြောင်းငြင်းခုံခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ကလှုံ့ဆျောမှုပေးသော, ငါသည်စစ်တမ်းသုတေသန၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးခေတ်ကာလအတွင်းတီထွင်ခဲ့ကွောငျးစုစုပေါင်းစစ်တမ်းအမှားမူဘောင် (ပုဒ်မ 3.3) အကျဉ်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီမူဘောင်ကိုယ်စားပြုမှု-in ကိုအထူးသဖြင့် non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာ (ပုဒ်မ 3.4) ကိုသစ်ကိုချဉ်းကပ်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုနေို measurement-in ကိုမှဖြေဆိုသူမှမေးခွန်းများမေး၏အထူးသဖြင့်အသစ်နည်းလမ်းများ (ပုဒ်မ 3.5) နည်းလမ်းသစ်များကတညျး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရပ်ကွက်များ (ပုဒ်မ 3.6) မှစစ်တမ်းဒေတာချိတ်ဆက်မှုအတွက်နှစ်ဦးသုတေသနလုပ်ငန်းတင်းပလိတ်များကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။